မြင်းမိုရ်ဦး: Dental Implant Treatment သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှု
Dental Implant Treatment သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှု
သွားတွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြီး၊ ခွန်အားနဲ့လူတကိုယ်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာတွေကြေညက်အောင်ဝါးစားနိုင်ဖို့ ၊စကားပီပီသသပြောနိုင်ဖို့၊ မျက်နှာအလှအပ၊ ပြီးပြည့််စုံတဲ့ပြုံးအလှတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သွားတွေမရှိတော့ရင်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ အာဟာရဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေကြေညက်အောင်မ၀ါးနိုင်တော့ပါဘူး။ ရှေ့သွားတွေကျိုးနေရင် သွားတွေနဲ့သွားဖုံးရိုးကပင့််ထောက်ထားတဲ့ မျက်နှာကြွက်သားတွေနိမ့််ကျသွားပြီး နဂိုရှိတဲ့အသက်ထက်ပိုပြီး ရုပ်ရည်ရင့််ရော်သွားသလိုမြင်ရတတ်ပါတယ်။ လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေမှာတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (personality) ကိုပါထိခိုက်တတ်ပြီး ကိုယ့််ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုပျောက်သလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့််ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သွားတွေကိုပြန်အစားထိုးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။
တချို့တွေမှာမတော်တဆထိခိုက်မိပြီးသွားကျိုးကြရတယ်။ သွားပိုးစားရောဂါ၊ သွားဖုံးနဲ့သွားမြစ်ဝန်းကျင်ရောင်ရမ်းရောဂါတွေကြောင့််သွားတွေနှုတ်လိုက်ရတာကတော့ အများစုဖြစ်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာတော့ မွေးရာပါသွားမပေါက်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။
လွတ်နေတဲ့သွားတစ်ချောင်းကိုအချိန်မီပြန်အစားမထိုးခဲ့ရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ ဘေးသွားတွေ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကသွားတွေ ယိုင်လာ ရှည်ထွက်လာပြီး အစာညပ်တာ၊ ပိုးစားတာ၊ သွားခြေပေါ်လာပြီးသွားကျဉ်တာတွေဆက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်သွားတွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
သွားပြန်အစားထိုးတာကို၊ မြန်မာလိုနားလည်အောင် သွားစိုက်တယ်လို့ဘဲ လွယ်လွယ်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကုသမှုအရ၊ သွားဖုံးရိုးထဲ သတ္တုတိုင် (dental implant) စိုက်ထည့်ပြီး သွားပြန်အစားထိုးတာကိုမှ၊ သွားစိုက်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အရင်က၊ သွားအရှင်အစားထိုးနည်းနဲ့ သွားအသေအစားထိုးနည်းနှစ်ခုဘဲရှိခဲ့ပါတယ်။
၁။သွားအသေအစားထိုးခြင်း (fixed partial denture/ dental bridge)
ဒီနည်းမှာတော့၊ သွားတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်း ကျိုးသွားတဲ့၊ နှုတ်လိုက်ရတဲ့နေရာမှာ၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ကျန်နေတဲ့ သွားအကောင်းပေါ်ငုံပြီး၊ ကပ်တဲ့ဆေးနဲ့ ပြုတ်မထွက်အောင် ကပ်ထားလိုက်တဲ့ အတွက်၊ အလွယ်တကူမပြုတ်နိုင် မဖြုတ်ထုတ်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာလိုတော့၊ သွားအသေစိုက်လို့သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်နေကြပါတယ်။ တကယ်က အသေစိုက်ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲ၊ ဘေးသွားတွေကို သေးသွားအောင် စက်နဲ့စားပစ်လိုက်ပြီး၊ သွားတုကိုအပေါ်က ငုံပြီးစွပ်လိုက်တာပါ။ ဘေးသွားတွေကိုတံတားလိုတွဲထားတဲ့အတွက် dental bridge လို့ခေါ်တာပါ။ သဘာဝသွားတွေပေါ်တင်ထားတဲ့အတွက်၊ ၀ါးအားကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီနည်းက၊ သွားတစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းပြန်အစားထိုးတာမျိုးမှသာကောင်းပါတယ်။ နှစ်ချောင်းထက်ပိုရင်တော့၊ ဘေးကသဘာဝသွားတွေက၊ ၀န်ပိုထမ်းရလို့ ခဏနဲ့ ယိုင်နဲ့လာတတ်ပါတယ်။
-သတ္တုသို့မဟုတ်ကြွေ (porcelain) ရွေးချယ်စိုက်နိုင်။
အားနည်းချက်-ဘေးသဘာဝသွားကို သေးအောင်စားပစ်လိုက်ရတဲ့အတွက်၊ သဘာဝသွားအထိနာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကြွေသွားပြန်ထည့်တဲ့အခါ၊ ငုံမယ့်သွားကို သေးနိုင်သမျှသေးအောင်စားပစ်လိုက်ရတဲ့အတွက်၊ သွားကျဉ်တာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်။
-စိုက်သွားနဲ့သဘာဝသွားကြားမှာ အစာတွေတွယ်ပြီး သွားဖုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
-သွားတုကိုကပ်ထားတဲ့ဆေးက အချိန်ကြာလို့ ပျော်သွားအားနည်းသွားတဲ့အခါ၊ သွားတုကိုချက်ချင်းဖြုတ်ပြီးဆေးပြန်ကပ်ရပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာဒါကိုသတိမပြုမိတဲ့အတွက်၊ ငုံထားတဲ့ စွပ်သွားအောက်ကို အစာတွေဝင်အောင်းပြီး၊ သဘာဝသွားကိုပိုးစားသွားတာများပါတယ်။ ဒီလို ငုံထားတဲ့သွားပါပိုးစားပြီးနှုတ်ရပြီဆို စိုက်သွားတစ်တွဲလုံးပစ်လိုက်ရပါတယ်။ သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
၂။ သွားအရှင်အစားထိုးခြင်း (removable denture)
ကိုယ်တိုင် သွားတုကို ခံတွင်းထဲထည့်ပြီး၊ ၀ါးနိုင်သုံးနိုင်၊ ပြန်ဖြုတ်ပြီးဆေးကြောသန့်စင်နိုင်လို့၊ အရှင်စိုက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သွားအားလုံးမကျိုးခင်၊ ကျန်တဲ့သဘာဝသွားတွေမှာ၊ ချိတ်-ကွင်း စတာတွေနဲ့ အလွယ်တကူပြုတ်မထွက်အောင်၊ ချိတ်ပြီးသုံးရတဲ့အရှင်စိုက်ကို removable partial denture-တစ်ပိုင်းအံကပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောက်ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း သွားအတုတွေအပြင်၊ သွားဖုံးအတု (အပန်းရောင် acrylic resin ခေါ်ပိုလီမာတစ်မျိုး) ကိုပေါင်းထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ သွားအားလုံးမရှိတော့တဲ့သူတွေမှာ၊ သွားတစ်ခွေလုံးကို အရှင်စိုက်အတုထည့်တာကိုတော့ complete denture-အံကပ်အပြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေထုဖိအား (atmospheric pressure) နဲ့ ခံတွင်းထဲမှာမြဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်သွားတစ်ခွေလုံးစိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်၊ ဒီလိုမြဲပြီးပြုတ်မကျအောင်၊ လေဖိနိုင်တဲ့ဧရိယာကျယ်အောင်၊ အာခေါင်မှာပါ၊ ဖုံးထားရပါတယ်။ အာခေါင်မှာကပ်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း အာကပ်-အံကပ်လို့ မြန်မာလိုခေါ်ကြပါတယ်။
အောက်အံကပ်အပြည့်တပ်ရတဲ့သူတွေမှာတော့၊ သွားတုကဖုံးထားတဲ့ဧရိယာကလည်းနည်းပြီး၊ လျှာကလည်းလှုပ်ရှားနေတတ်တာကြောင့်၊ အပေါ်အံကပ်နဲ့စာရင် မြဲမြံမှုအားနည်းပါတယ်။ အရှင်စိုက်က၊ သွားဖုံးပေါ်တင်ထားပြီး၊ သွားဖုံးသားကို အဓိက အားပြုဝါးရတာပါ။
အားသာချက် - ဘေးသဘာဝသွားတွေကို သေးအောင်စားပစ်ရန်မလို။
-သွားနောက်ထပ်နှုတ်ရလျှင်လည်း ရှိပြီးသားအရှင်စိုက်အံကပ်တွင် ထပ်ပေါင်းပြီးအစားထိုးနိုင်။
- သန့်ရှင်းမှုမရှိရင် ဘေးကပ်ရက်သွားကိုပိုးစား။
-သွားဖုံးသားကိုအားပြုပြီးဝါးရတဲ့အတွက် ပင်ကိုယ်သွားလို ၀ါးအားမကောင်း။
- သွားတုအပြင်၊ သွားဖုံးသားအတုနဲ့ ၀န်ကိုပြန့်သွားအောင်ဧရိယာကျယ်ကျယ်အုပ်ထားတဲအံကပ်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်ထားရတဲ့အတွက်၊ ကျင့်သားမရခင်အလွန်နေရထိုင်ရခက်။
-ငါးနှစ်တစ်ကြီမ်ခန့် အသစ်လဲပေးရ။ (အချိန်ကြာလာရင်သွားဖုံးရိုးနိမ့်ကျသွားပြီး အံကပ်က ချောင်လာတဲ့အတွက်)
ခုချိန်မှာတော့ သမားရိုးကျသွားစိုက်နည်းနှစ်မျိုးအပြင် နိုင်ငံတကာခေတ်စားနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှု လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သွားစိုက်နည်းနဲ့သွားပြန်အစားထိုးလို့ရနေပါပြီ။
၃။ သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှု (သွားဖုံးရိုးအတွင်းသွားအသေစိုက်ခြင်း) (dental implant)
ဒီနည်းကတော့၊ အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာမှာသုံးပြီး ခေတ်စားလာနေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖုံးရိုးထဲကို၊ titanium သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ dental implant စိုက်ထည့်ပြီး၊ အပေါ်ကကြွေသွားစိုက်တဲ့၊ သွားအသေစိုက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ titaniumနဲ့အရိုးသားက၊ တွဲဆက်သွားတဲ့အတွက် အရိုးမှာပြဿနာမဖြစ်မချင်းပြန်မပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိနည်းလမ်းတွေထဲက အကောင်းဆုံး၊ နှစ်ကြာရှည်အခံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက်- သွားဖုံးရိုးဟာ သွားနှုတ်ပြီးတာနဲ့ တစ်နှစ်ကိုနည်းနည်းချင်းနိမ့်ဆင်းသွားပါတယ်။ ခုနကပြောခဲ့တဲ့သွားအစားထိုးနည်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ၊ ဒီသွားဖုံးရိုးနိမ့်ဆင်းတဲ့ပြဿနာဟာ၊ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ dental implant စိုက်ထည့်လိုက်ရင်တော့၊ သွားဖုံးရိုးဟာ နိမ့်မဆင်းတော့ပါဘူး။
- သွားဖုံးရိုးထဲစိုက်ထည့်ထားတဲ့သတ္တုချောင်းပေါ်အားပြုပြီး စိုက်တင်ထားတဲ့သွားတုကိုဝါးတာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ သဘာဝသွားအတိုင်းဝါးနိုင်၊ သဘာဝသွားလိုခံစားရ။
- ဘေးသွားအကောင်းတွေကို သေးအောင်စားပစ်ရန်မလိုတော့။
-ဘေးသွားတွေကိုမှီစရာတွဲစရာမလိုဘဲ စိုက်လိုတဲ့နေရာသီးသန့်မှာ စိုက်နိုင်။
-လိုအပ်ပါက အပေါ်ပိုင်းစိုက်သွားတုကို လိုသလိုဖြုတ်ပြင်နိုင်။
အားနည်းချက် - ကုန်ကျစရိတ်ကြီး။
-တစ်နှစ်တစ်ခါ ဆေးခန်းမှန်မှန်ပြန်ပြပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့လို။
-သွားဖုံးရိုးနိမ့်နေရင်၊ အရိုးသားပြန်တက်လာဖို့ အစားထိုးကုသမှု (bone graft) အရိုးပြန်တည်ဆောက်ကုသမှု (bone regenerative treatment) အရင်လုပ်ဖို့လို။
သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှုက သမားရိုးကျသွားစိုက်နည်းတွေနဲ့ မတူတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျသွားစိုက်နည်းတွေကို သွားဆရာဝန်အားလုံးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့်၊ နောက်ဆုံးပေါ် သွားမြစ်တုအစားထိုးကုသမှုကိုတော့၊ သွားမြစ်တုအစားထိုးအထူးကုပါရဂူတွေက အဓိက ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ ကုသပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကုသမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးပြုလေ့လာဆည်းပူးထားတဲ့၊ သွားနဲ့ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက သွားမြစ်တုခွဲစိတ်ထည့်သွင်းတဲ့အပိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ဒီလိုဘဲအထူးလေ့လာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ သွားတုအထူးကုဆရာဝန်တွေက သွားမြစ်တုပေါ်ကနေ စိုက်သွားတုတပ်ဆင်တဲ့အပိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတချို့မှာတော့ ဘွဲ့ကြိုသင်ခန်းစာတွေမှာကတည်းက ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးနေပြီး ရိုးရိုးသွားဆရာဝန်ကပါ ကုသပေးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့၊ အခုသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့လွန်မာစတာလာတက်နေတဲ့ သွားဆရာဝန်တွေကို သင်ကြားပေးဖို့ စပြီး ဂျပန်ကပါလာတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေထည့်ပေးနေပါပြီ။
Ref: Understanding dental implants
Posted by Dr. Nyan at 11:00 AM
Thanksalot for sharing. Good post.
Omachi shite orimasu..... !!
Yar Moe said...
အားနည်းချက်ရော အားသာချက်တွေပါ ဖော်ပြထားတော့ တကယ်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုဉာဏ်။
Ma Ma War wrote that you will no more work at school and you are going to run own school.
Some think it is not fair because you went for PhD and now you do not want to work for school.
So that some wrotealetter to kyan OO see to let them know about your plan.
Many student hate Ma Ma War .some sayar and sayarma too.
ွှ့Thu Rah said...
ဆရာ ဥာဏ် ခင်ဗျား လွန်ခဲ့ တဲ့ တနှစ်ခွဲ လောက်က ကျွန်တော် သွား ၂ ချောင်း(အပေါ် နဲ့ အောက်)ကို ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ဆိုသလို နုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် က ထိုင်းမှာနေပါတယ်။ သွားပြန်စိုက်ရန်အချိန်သင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သက်သာစေရန် မြန်မာပြည်ပြန်မှပဲ စိုက်မယ်လို့်စိတ်ကူးထားပါတယ်၊မစိုက်ပဲ အချိန်အကြာကြီး ထားရင်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့သိပါတယ်၊ဘယ်လောက်ကြာတဲ့ အထိထားလို့ ရပါသလဲခင်ဗျာ။အခုတော့ အစာစားပြီးတိုင်း ဂရုတစိုက်နဲ့သွားတိုက်ပါတယ်၊အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။
အခုမှဘလော့ဂ်ကိုပြန်ကြည့်ချိန်ရလို့ လအတော်ကြာပြီးမှ ပြန်ဖြေရတာခွင့်လွှတ်ပါ။
သွားနှုတ်ပြီးပြန်မစိုက်ဘဲကြာလာရင် ဘေးသွားယိုင်တာ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားရှည်ထွက်လာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာရင်ဖြစ်လည်းဆိုတာကတော့၊ တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။ လူတယောက်ထဲမှာတောင် အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်။ ငယ်တုန်းမှာနှုတ်ခဲ့ရရင်သွားတွေယိုင်ဖို့ပိုများပါတယ်။ အသက်ကြီးမှဆိုရင်တော့ သွားတွေရွေ့ဖို့အချိန်ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ ယိုင်မှာစိုးရိမ်ရင်တော့ ယာယီအနေနဲ့ဖြုတ်၊တပ်လို့ရတဲ့အရှင်စိုက်လေးစိုက်ထားတာကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မရေးတာက ကျောင်းမှာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ လုံးဝ မရေးပါ။နိုင်ငံခြားကနေ ပညာတော်သင်ပြန်လာတဲ့သူတွေကို အခွင့်အရေးမပေးတတ်တဲ့ အထက်ကလူတွေကို ခံပျင်းလို့ ရာထူးတိုးမပေးတာထက် ကျောင်းမှာ ဌာနတစ်ခုဖွင့်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို ပညာမပေးနိုင်ရင် ကိုယ်ပိုင်အင်ပလန့်စင်တာထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ကလေးတွေကို ပညာမျှဝေဘို့ပြောတာပါ။
လူတွေက ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကနေကားပြီး သူလိုရာဆွဲတွေး ဆွဲပြောကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မကတော့ ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ရယ်ချင်သွားတယ်။မုန်းချင်တဲ့သူမုန်းပါ ကျွန်မ ဂရုမစိုက်ပါ။